आउटलुक र यसको ऐतिहासिक प्रकार
कुनै पनि sentient जा यसको आफ्नै विचारधारा गठन गरेको छ। यो दार्शनिक अवधारणा मनोवृत्ति, विश्वास, विश्व मा आफ्नो स्थान निर्धारण गर्न, वास्तविकता को एक समग्र दृष्टिकोण गर्न व्यक्ति अनुमति योगफल हो। संसार र यसको ऐतिहासिक प्रकार विचार गर्नुहोस्।
यो जानिन्छ, लामो दार्शनिकहरू भविष्यमा संसारमा युद्ध, वर्ग असमानता, गलतफहमीले पुस्तामा छैन भनेर भएको छ। तर, प्रत्येक पारित वर्ष (दशक) संग, यो स्पष्ट यसलाई स्वप्नलोक विज्ञान कल्पना पुस्तकहरू योग्य को वास्तविकता देखि बरु टाढा छ भनेर बन्नेछ। यस्तो अवस्थामा मा, दार्शनिक मुद्दाहरू एक व्यक्ति भइरहेको छ के सोच्न बनाउने, सामने आउँछन्।
पङ्क्तिबद्ध तीन प्रकारका विभाजित छ:
- संसारको समझ। को प्रक्रिया को मानसिक विश्लेषण उद्देश्य वास्तविकता को।
- रवैया। होश मार्फत वातावरण बारे जानकारी प्राप्त।
- संसारको धारणा। उदाहरणात्मक उदाहरण को आधारमा पूर्ण छवि बनाउन।
एक मानिस आफूलाई संसार र यसको ऐतिहासिक प्रकार अन्वेषण गर्न कार्य सेट, यो जानकारी को एक ठूलो रकम लागि तयार हुनुपर्छ। माथिको-उल्लेख प्रकार, साधारण विभाजित छन् धार्मिक, दार्शनिक र पौराणिक worldview।
के संसारको बुझ्न रोचक छ र यसको ऐतिहासिक प्रकार प्रत्येक घटक वस्तुको अर्थ प्रकट बिना असम्भव छ। त्यसैले गरेको क्रममा सुरु गरौँ।
साधारण संसारमा सधैं यो विज्ञान र दर्शन दुवै (पौराणिक कथा संग धर्म सहित) को भाग हो रूपमा भएको छ। केहि को उत्पादन मा सहभागिता (रोजगार), जीवन, मनोरञ्जन, मानव जीवन को सांस्कृतिक घटक को प्राकृतिक प्रक्रियाहरु को सरल अवलोकन र कुराकानी - यो सबै worldview को साधारण प्रकार खेल्छ। त्यसैले ठूलो सूची कि यस प्रकारको कहिल्यै, प्रत्येक व्यक्ति (- आत्मपुरक पढ्नुहोस्) को लागि पूर्ण व्यक्तिगत रूपमा दोहोरिदैन सुझाव। एकै समयमा, निम्न प्रकार को सबै यसको आधारमा आधारित।
छैन अचम्मको कुरा, यो अक्सर "worldview र यसको ऐतिहासिक प्रकार" को अवधारणा द्वारा चाहनुभएको छ भन्ने कठिनाई छ। अर्कोतर्फ, यसलाई बनाउन suffices - यो कम्तिमा एक सामान्य विचार दिन हुनेछ। साधारण एक पौराणिक worldview छ पछि (कहिले काँही पहिलो प्रकार उल्लेख)।
यसलाई साधारण अवलोकन देखि व्युत्पन्न तार्किक generalizations आधारमा मानव चेतना सिर्जना गरिएको छ। (- गर्जन - वर्षा - परिवहन परमेश्वरको - गर्जन बादल) तर्क को तार्किक श्रृंखला को आंशिक उल्लंघन को peculiarity, तर प्राकृतिक प्रक्रियाहरू को प्रत्यक्ष अवलोकन पुष्टि (यसलाई केहि सीधा प्रमाणित गर्न असम्भव छ)। पौराणिक कथाहरु मा, विज्ञान विपरीत, यो सबै बताए। को उद्देश्य वास्तविकता, अधिक साधारण पौराणिक worldview बुझ्न गर्न कम-विकास विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। किन मानव इतिहासको सुरुतिर, पौराणिक कथाहरु जस्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका, सबै व्याख्या गर्न अनुमति प्ले छ कि छ प्राकृतिक घटना।
को को दिल मा धार्मिक संसारमा (दोस्रो प्रकार), आयोजना शक्ति मानिसको समझ परे झूट मा unprovable विश्वास छ। हाल, संसारको जनसंख्याको एक महत्वपूर्ण भाग धर्मको आधारमा संसारको यसको आफ्नै तह खेल्छ।
दार्शनिक (तेस्रो) प्रकृति र मानव बुद्धिको रहस्यहरुलाई बुझ्न संसारमा इच्छा को प्रकार निर्धारण गर्छ।
त्यहाँ व्यावहारिक र सैद्धान्तिक स्तर worldview छन्। पहिलो - मानक (गैर-वैज्ञानिक), दैनिक घटनाहरूको अवलोकन मा आधारित। दोस्रो - अनुसन्धान विश्लेषण र निष्कर्ष पनि समावेश छ। को दर्शन बिल्कुल सैद्धान्तिक स्तर प्रयोग गर्दछ।
सिद्धान्त मा, को जुदाई विचारधारा को प्रकार दर्शन बस किनभने सैद्धान्तिक आधार को सम्भव भएको छ। प्रेम र "Sophos" - - बुद्धि शब्द "दर्शन" दुई ग्रीक शब्द "filo" बाट लिइएको हो।
मान्छे परिवर्तन छैन - साँचो वा छैन?
के सत्य र नैतिकता को अवधारणा मा सामाजिक वैज्ञानिकहरूले अर्थ
चिनियाँ बुद्धि, एक पुरा मान्छे को जीवन तिर मनोवृत्ति
Empiricism - यो सिक्ने केवल विधि हो?
प्रकृति कति सुन्दर वसन्त
फुटबल खेलाडी Duayt यर्क: जीवनी, मूल्यांकन, तथ्याङ्क र व्यक्तिगत जीवन
होटल Konar र Doruk (Konar होटल3*, टर्की): समीक्षा, मूल्यांकन, फोटो
सुझाव - सुझावहरू मा एक ... नङ जेल
जूली सेतो। जीवनी देखि फिलिमोग्राफी र तथ्यहरु
सेतो मह आलुबखडा: विविधता को फोटो र विवरण
कोलम्बस (ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका): इतिहास, ठाँउहरु, रोचक तथ्य
दबाइ 'ibuprofen': प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ
गर्म कुञ्जीहरू शब्द के हुन्
फ्रान्सेली लेखक Anri Barbyus: जीवनी, रचनात्मकता र रोचक तथ्य
पुच्छ्रेतारा - एक कस्मिक शरीर। आफ्नो रहस्य के हो?